MB 2017 Luulyo, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Waxaa ka mid ah falsafada iyo fiqiga, waxaa lagu magacaabaa dhibaatada maskaxda (sidoo kale dhibaatada jirka iyo nafta). Maaha arrin ku saabsan isku-duwidda gawaarida (sida cabitaan koob oo koob ah adigoo aan wax daadineynin ama khaladaad sameynin marka aad ciyaar ciyaareyso). Taabadalkeed, su'aashu waxay tahay jirkeenu waa jidad iyo fikirradeenu waa ruuxiyan; si kale haddii loo dhigo, inay dadku si uun u yihiin jidhka ama isku darka jidhka iyo ruuxiga.
In kasta oo Kitaabka Quduuska ahi aanu si toos ah ugaga hadlin dhibaatada maskaxda-jidhka, waxay ka kooban tahay tixraacyo cad oo dhinaca jidhka aan ka muuqan ah u ah jiritaanka aadanaha oo kala saaraya (ereyada Axdiga Cusub dhexdiisa) jirka (Jirka, Jirka) iyo nafta (Maskaxda, ruux). In kasta oo Kitaabka Quduuska ahi aanu sharrax ka bixinaynin sida jidhka iyo naftu isugu xidhan yihiin ama sida ay si caadi ah ula falgalaan, haddana labada uma kala saaro ama uma tuso inay is beddelayaan oo naftauna weligeed jidhka kuma yarayn. Aayado dhowr ah ayaa tilmaamaya "ruux" gaar ah oo innaga dhex jira oo muujinaya xiriir la leh Ruuxa Quduuska ah, kaasoo soo jeedinaya in aan xiriir shakhsi ah la yeelan karno Ilaah (Rooma 8,16:1 iyo 2,11 Korintos).
Markaan tixgelinayno dhibaatada maskaxda ku haysa, waxaa muhiim ah inaan ku bilowno barida aasaasiga ah ee Qorniinka: ma jiri doonaan dad mana ay noqon doonaan wixii ay dhaafsiisan yihiin, xiriir joogta ah oo lala yeesho iskudhafka abuuraha Eebbe, oo wax walba Waxyaabaha loo abuuray oo la ilaaliyo jiritaankooda. Abuurista (oo ay ku jiraan aadanaha) ma jiri doonaan haddii Ilaah gebi ahaanba laga soocay iyada. Abuuriddu iskeed uma abuurin mana sii wadato jiritaankeeda lafteeda - oo keliya Ilaah baa ku jira laftiisa (Fiqiga fiqi ahaan waxaay ka hadlayaan Ilaahnimadiisa halkan). Jiritaanka wax kasta oo abuuray waa hadiyad ka timid Ilaaha is-haysta.
Ka soo horjeedda maragga kitaabiga ah, dadka qaar ayaa sheeganaya in aadanuhu uusan ahayn wax ka badan waxa nool. Sheegashadaani waxay sare u qaadeysaa su'aasha soo socota: Sidee wax u eg yahay wax aan macquul aheyn sida miyirka aadanaha ay uga soo bixi karaan wax miyir la’aan ah oo ah arrimaha jirka? Su'aal laxiriira ayaa ah: Maxay tahay sababta macluumaad xasaasi ah? Su'aalahan waxay kor u qaadayaan su’aalo dheeri ah oo ku saabsan in miyirku kaliya yahay khayaali ama uu jiro (walxaha aan jirka ahayn) ee ku xiran maskaxda agab, laakiin waa in la kala gartaa.
Ku dhawaad ​​qof walba waa ogolyahay in dadku miyir qabaan (adduunyo gudaha ah oo fikradaha leh oo leh sawirro, dareenno iyo dareemo) - taas oo guud ahaan loo yaqaan awoodda fakarka taas oo innaga run ah sida baahida cuntada iyo hurdada. Si kastaba ha noqotee, ma jiro wax heshiis ah oo ku saabsan nooca iyo waxa keenaya miyirkeenna / fikirka. Farsamooyinku waxay u tixgeliyaan oo keliya natiijada firfircoonida korantada ee maskaxda jirka. Waxyaalaha aan jeclayn (oo ay ku jiraan Masiixiyiin) waxay u arkaan inay tahay dhacdo aan caadi ahayn oo aan la mid ahayn maskaxda jidhka.
Hadallada ku saabsan miyirka ayaa ku dhaca laba qaybood oo waaweyn. Qeybta koowaad waa jirdhiska (Materialism). Tani waxay baraysaa inuusan jirin adduun ruuxi ah oo aan muuqan. Qeybta kale waxaa loo yaqaan isbarbar dhigga laba-geesoodka ah, kaasoo baraya in maanka uu lahaan karo astaamo jireed ama gabi ahaanba aan aheyn jir ahaan, sidaa darteed aan lagu sharixi karin muujinta muuqaalka jirka. Is barbar yaaca labada aragti ayaa maskaxda iyo maskaxda u arka is dhexgalka iyo ka shaqeynta isbarbar dhigga - haddii maskaxdu dhaawacan tahay, kartida caqli galida caqli ahaan waa la daciifin karaa. Natiijo ahaan, is-dhexgalka isbarbar socda ayaa sidoo kale saameeya.
Marka la eego is barbardhiga labada, ereyga labaalism waxaa loo isticmaalaa aadanaha in lagu kala garto waxa udhaxeeya is dhexgalka muuqda iyo maskaxda ee maskaxda. Hawlaha maskaxda ee miyirka leh ee ku dhaca shaqsiyan qof walba waa mid gaar ah oo aan loo adeegsan karin banaanka. Qof kale ayaa heli kara gacanteenna, laakiin ma baran karaan fikradaheena gaarka ah (iyo inta badan, waxaan jecel nahay in Ilaah sidan u habay!). Intaas waxaa sii dheer, fikradaha aadamiga qaarkood ee aan annaga nafteena ku leenahay laguma koobi karo arrimo maadi ah. Himilooyinka waxaa ka mid ah jacayl, caddaalad, cafis, farxad, naxariis, nimco, rajo, qurux, run, naxariis, nabad, ficil aadamiga iyo mas'uuliyad - kuwanu waxay siinayaan macno iyo micno nolosha. Bayaan ku jira Kitaabka Quduuska ah ayaa noo sheegaya in dhammaan hadiyadaha wanaagsan ay ka yimaadeen xagga Ilaah (Yacquub 1,17). Tani miyey sharxi kartaa jiritaanka ujeeddooyinkan iyo daryeelidda dabeecaddayada bini-aadamnimada - hadiyado ahaan Eebbe u siiyay aadanaha?
Masiixiyiin ahaan, waxaan tixraacnaa waxqabadyada aan la baadhi karin iyo saameynta Ilaah ee adduunka; taas oo xidha ficiladiisa iyada oo loo marayo waxyaabo la abuuray (Saameyn dabiici ah) ama ficil toos ah oo uu sameeyo Ruuxa Quduuska ah. Maaddaama Ruuxa Quduuska ahi aan la arki karin, shaqadiisa lama qiyaasi karo. Laakiin shaqadiisu waxay ka dhacdaa adduunka maaddada. Shaqadiisa waa mid aan la saadaalin karin lagumana dhimi karo silsiladaha sababa-iyo-saamaynta leh ee la fahmi karo. Shaqooyinkaani kuma koobna abuuritaanka Eebbe kaliya ee sidoo kale, laakiin sidoo kale jidh ahaanshaha, sarakicinta, Ascension, howsha Ruuxa Quduuska ah iyo soo laabashada la rajeynayo ee Ciise Masiix si loo dhammeeyo Boqortooyada Ilaah, iyo sameynta cirka iyo dhulka cusub.
Ku laabo dhibaatada maskaxda maskaxda: Jabaatada wax sheegaa waxay sheeganayaan in maanka lagu sharxi karo jir ahaan. Aragtidaani waxay furmeysaa suurtagalnimada, haddii aan loo baahnayn, si dabiici ahaan maskaxda looga soo saaro. Tan iyo markaas, muujinta «sirdoonka macmal» (AI) ayaa loo qaabeeyey, AI waa mowduuc si rajo wanaagsan ay u arkaan soo-saareyaasha kombuyuutarrada iyo qorayaasha khayaaliga sayniska. Sannadihii la soo dhaafay, AI waxay noqotay qayb muhiim ka ah teknolojiyadeenna. Algorithms-ka waxaa loo habeeyey dhammaan noocyada aaladda iyo mashiinnada, laga bilaabo taleefannada gacanta illaa gawaarida. Soosaarista software iyo qalabka ayaa aad usameeyay in mashiinadu ku guuleysteen aadanaha intii lagu jiray tijaabooyinka ciyaarta. Sannadkii 1997, barnaamijka kumbuyuutarka ee loo yaqaan "IBM computer Deep Blue" wuxuu garaacay kooxda heysata horyaalnimada adduunka ee Garry Kasparov. Kasparov wuxuu ku eedeeyay IBM musuqmaasuq wuxuuna codsaday aargudasho. Waxaan jeclaan lahaa in IBM uusan diideyn, laakiin waxaa la go'aamiyay in mashiinku si adag u shaqeeyey oo si fudud ugu diray Deep Blue howlgab. Sanadkii 2011, Bandhiga Jeopardyuiz wuxuu martigaliyay ciyaar u dhaxeysay IBM Watson Computer iyo labada ugu sareysa ee Jeopardy. (Halkii ay ka jawaabi lahaayeen su'aalaha, ciyaartoydu waa inay dejiyaan su'aalaha ku saabsan jawaabaha la bixiyo ee xawaaraha hillaaca.) Ciyaartoyda ayaa ku lumiyay dar dar ballaaran. Waxaan faallo ka bixin karaa oo keliya (Tanna waxaa loola jeedaa macno ahaan) in Watson, oo kaliya u shaqeynayay wixii loogu talagalay oo loogu talagalay barnaamijka, uusan faraxsanayn; laakiin softiweerka AI iyo injineerada qalabka. Taasi waa inay wax nooga sheegtaa!
Waxyaabaha loo yaqaan 'material materialist' waxay shegayaan in aysan jirin wax daliil ah oo sheegaya in maskaxda iyo jirku ay kaladuwan yihiin oo ay kaladuwan yihiin Waxay ku doodayaan in maskaxda iyo miyirku ay isku mid yihiin oo in si uun maskaxdu uga soo baxdo geedi socodka kumeelgaarka maskaxda ama ay ka soo baxdo adkaanta geedi socodka ka socda maskaxda. Mid ka mid ah waxa loogu yeero "cawaan-laaweyaasha xanaaqsan", Daniel Dennett, ayaa xitaa sii sii socda oo wuxuu ku andacooday in miyirku uu yahay khayaali. Rafiiqa masiixiga ah ee Greg Koukl ayaa farta ku fiiqaya khaladaadka aasaaska u ah sababtii Dennett:
Haddii aysan miyir beel jirin, ma jiri lahayn dariiqa lagu garto inay ahayd uun khayaali. Haddii miyirka loo baahan yahay inuu garto khayaal, markaa ma noqon karto khayaali laftiisa. Sidaa si la mid ah, qofku waa inuu awood u yeesho inuu garto labada adduunyo, midka dhabta ah iyo midka khaldanba, inuu garto inuu jiro farqi u dhexeeya labada sidaa darteedna uu awood u yeelan karo inuu garto dunida cilmiga leh. Haddii aragtida oo dhami ay khayaal tahay, midna ma awoodo inuu u aqoonsado sidaas.
Iyada oo la adeegsanayo Qaab dhismeedka aas aasiga ah lama ogaan karo. Waxaan go'aan ka gaari karnaa oo keliya ifafaale maadi ah oo la arki karo, la cabbiri karo, la arki karo oo lagu celin karo. Haddii ay jiraan waxyaabo keliya oo si muuqata awood ahaan loo soo bandhigi karo, markaa waxa aan gaar u noqon karin (lama celin karo). Hadday tani tahay kiiska, markaa sheekada ka dhacday taxanaha gaarka ah, taxanaha aan lagu soo celin karin dhacdooyinku ma jiri karaan! Taasi waxay ku habboonaan kartaa, qaarna waa sharraxaad sabab la'aan ah inay jiraan waxyaabo keliya oo lagu caddeyn karo hab gaar ah oo la doorbiday. Marka la soo koobo, ma jirto qaab lagu caddeeyo awood ahaan in kaliya waxyaabaha si hufan loo xaqiijin karo / waxyaalaha jira ay jiraan! Waa wax aan caqli gal aheyn in runta oo dhan laga dhigo waxa lagu ogaan karo qaabkan. Muuqaalkan waxaa mararka qaar loogu yeedhaa Sayniska.
Tani waa mowduuc weyn oo waxaan xoqday dusha sare, laakiin sidoo kale waa mowduuc muhiim ah - fiirso muujinta Ciise: «Ha ka baqina kuwa dila jirka laakiin ma dili karaan nafta» (Matayos 10,28). Ciise muxuu ahaa maah-doonka - si cad ayuu u kala soocay jirka jirka (oo ay kujirto maskaxda) iyo qayb ka mid ah iskuxirnaan la'aanta qofkayaga bini aadamka, taasoo ah udub dhexaadka shaqsiyadeena. Markuu Ciise noo sheegay inaanan u oggolaan kuwa kale inay dilaan nafteenna, wuxuu sidoo kale ka dhigan yahay inaanan u oggolaan kuwa kale inay iimaankeenna iyo aaminaadda Ilaah ku halleeyaan. Ma arki karno Ilaah, laakiin waxaan naqaanaa oo ku aaminnaa isaga oo aan ku dhex qaadan karno miyir-ahaanta jir ahaanta ah waxaan xitaa dareemi karnaa ama garan karnaa. Aaminaada aan Ilaah u qabno runtii waa qayb ka mid ah waayo-aragnimadayada miyirka leh.
Ciise wuxuu ina xusuusinayaa in maskaxdeena ay tahay qeyb muhiim ka ah xer u noqoshada xerkeena. Miyirkayagu wuxuu ina siinayaa awood aan ku rumayno Ilaaha saddexanka ah, Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Waxay naga caawinaysaa inaan aqbalno hadiyadda iimaanka; aaminaadani waa "kalsooni adag waxa aad rajaynayso iyo aaminaad aan shaki lahayn oo ku saabsan waxa aadan arkin" (Cibraaniyada 11,1). Miyirkayagu wuxuu awood inoo siiyaa inaan ogaano oo aan aamino Ilaah inuu yahay abuuraha si aan "u garowsano in dunidan lagu abuuray Ereyga Ilaah, si waxkasta oo aad aragtid ay ka soo baxaan waxba (Ingiriisiga :s: laga soo arki karo) ayaa noqday » (Cibraaniyada 11,3). Miyirkayagu wuxuu awood inoo siinayaa inaan helno nabad ka sarreysa caqliga oo dhan, inaan garowno inuu Eebbe yahay jacayl, inaan rumeysanno Ciise inuu yahay Wiilka Ilaah, inaan rumeysanno nolosha weligeed ah, inaan ogaano farxadda dhabta ah iyo inaan ogaano inaan dhab ahaan nahay Ma yihiin carruurta Ilaah jecel.
Aynu ku faraxsanahay in Ilaah ina siiyay maskax si aan u aqoonsano adduunkeena iyo isaga,